Zavers: fizarana tapakila nomerika avy amin'i Google | Martech Zone
Alakamisy Febroary 20, 2014 Alakamisy Febroary 20, 2014 Douglas Karr
Google dia manitatra ny fizarana coupon nomerika miaraka amin'i Zavers. Zavers dia mamela ny mpivarotra hividy tapakila mahitsy ho an'ny mpiantsena marina, hanitatra fandaharana valisoa ary hanaraka ny fanavotana amin'ny fotoana tena izy. Hitan'ny mpiantsena ny fihenam-bidy ataon'ireo mpanamboatra amin'ny tranokala mpivarotra ankafizin'izy ireo ary ampidiro ao anaty karapan'izy ireo ny tapakila nomerika. Ny tahiry dia alaina ho azy eo amin'ny ora fiandrasana rehefa soloin'ny mpiantsena ny karatra valiny na soratany amin'ny nomeraon-telefaon'izy ireo - tsy ilaina ny scanning na fanasokajiana tapakila ara-batana.
Soa azo avy amin'ny fizarana tapakila nomerika Zavers
valisoa - Zavers avy amin'i Google dia mamela anao hanitatra fandaharana famporisihana efa misy ary hanome valisoa valiny amin'ny tapakila nomerika. Azonao atao koa ny manolotra fihenam-bidy ho an'ny mpanamboatra nefa tsy mila mamorona programa famporisihana.
Ampitomboy ny hafainganan'ny fifanakalozana ao amin'ny fisoratana anarana - Ampiharina amin'ny fividianana seamons tsy misy ilaina ny mampiseho sy scan ny taratasy na tapakila nomerika. Ny fanavotana dia miseho amin'ny fotoana tena izy, mampihena ny fotoana fikorontanana sy ny fizahana. Ireo mpanjifa mampiasa Google Wallet dia afaka manavotra ny tapakilan'izy ireo avy hatrany ihany koa amin'ny fikitihana ny telefaoniny amin'ny ora.
Tsory ny fametrahana kupon - Zavers avy amin'i Google dia manamora kokoa ny fametrahana sy manakana ny fisolokiana.
Ampitomboy ny haben'ny harona - Mahazoa fidirana amin'ny tambazotram-panodinam-bokin'ny mpanamboatra Google mba hanampiana anao hampitombo ny haben'ny harona sy ny fivezivezin'ny tongotra amin'ny lalantsara vaovao.
Fitsinjarana kendrena - ny fahafaha-mizarazara ho an'ny mpanjifa dia mamela anao handefa ny tapakila mety amin'ny mpanjifa mety. Hanitatra ny tratry ny tapakila mikendry manerana ny tranonkala amin'ny tamba-jotra doka Google sy ny Google Network.
Ny maodelin'i Zavers dia manome antoka isaky ny fanavotana fa tsy misy sarany amin'ny fitsinjarana, ny fahatsapana na ny hitsitsy - mandoa ihany rehefa misy mpanjifa manavotra tapakila ho an'ny vokatra nampiroborobo. Ny Google Display Network no tambajotra fanaovana dokambarotra lehibe indrindra amin'ny karazany mitovy amin'izany, mahatratra sivy amin'ny olona folo mahery ao Etazonia
Tags: tapakiladoka couponfizarana tapakilafanavotana tapakilatapakila nomerikaGoogle +tapakila findayzavers
Ny mailaka sy ny haino aman-jery sosialy Jugalbandi